Isu tatova neKernel 4.14.1 pano | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mekuburitswa kwazvino kweKernel 4.14, wongororo yako yekutanga yazosvika uye saka vhezheni yayo yekutanga yaifunga 100% yakagadzikana. Shanduro 4.14.1 yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza, chimwe chinhu vazhinji venyu chamakamirira.
Iyo kernel 4.14.x yakateedzana Izvo zvave zvichitarisirwa kwazvo nevose, nekuti, ndiyo yekutanga Linux Kernel kuve neiyo 6 gore rutsigiro, chimwe chinhu chatakatofambira mberi pano mwedzi yakati wandei yapfuura. Nenzira iyi, isu tiri kutarisana neyakagadzikana uye yakachengeteka vhezheni yeKernel kusvika zvino, yakakodzera kuisa uye "kusanetseka", kwemakore matanhatu.
Mhando 4.14.1, Inotaridzirwa yekutanga vhoriyamu vhezheni ye4.14 dzakateedzana. x. Izvi zvinokonzerwa nechengetedzo mutemo wezviyo, izvo zvinosiya yekutanga vhezheni (mune ino kesi 4.14), seisina kugadzikana. Izvi zvinodaro nekuti dzimwe nguva, zvikanganiso zvidiki zvekuchengetedza zvinogona kupinda mukati nekuda kwekusangana nemisi yakatarwa uye nekudaro, zvinokurudzirwa kuti usaise yekutanga vhezheni yezvikamu munzvimbo dzekuvandudza dzekuchengetedza.
Nekudaro, vhezheni .1, mune ino kesi 4.14.1, yatove kutariswa seyakagadzikana zvizere. Izvi zvichatibvumidza kunakirwa neKernel iyi, iyo mukuwedzera pakusanganisira rutsigiro rurefu, zvakare inovandudza AMD memory encryption chengetedzo, yakagadziridzwa giraidhi kadhi ndangariro manejimendi uye kuwedzera kweyekupedzisira muyeuchidzo pane ma processor nema x86 ekuvakisa.
Uyewo, kumanikidza kugona paBtrfs uye maSquashFS masisitimu akagadziridzwa, uchishandisa iyo zstd system. Pamusoro pezvo, kumwe kuvandudzwa kudiki kwakaunzwa, madhiraivha akagadziridzwa uye madudu akaonekwa mushanduro dzakapfuura akagadziriswa. Shanduro 4.14.1 haina kumbochinja kana ichienzaniswa ne4.14, asi zvayakashanda zvakashanda kuvimbisa kudzikama kweshanduro iyi.
Shanduro 4.14.1 ichawedzerwa kune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana, kunyanya iyo Rolling Inosunungura. Nekudaro, isu tinokwanisa kuirodha pasi sekugara kuri mu Kernel.org uye wozvinyora nemaoko mukugovera kwedu kwatinoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Isu tatova neKernel 4.14.1 pano
Ini handikwanise kuumbiridza, zvinondipa kukanganisa kana ndichigadzira make, ndaedza cp -p Kconfig .config make uye ini ndinowana runyorwa rwezvinhu zvekusarudza pakati peY / N / m uye hazviperi, chero mazano?
Kugadziriswa kwakaita seichi: